Notsapaina ny herin'ny batterin'ny iPhone 13 taorian'ny nanesorana azy ireo | Vaovao IPhone
Notsapaina ny herin'ny batterin'ny iPhone 13 taorian'ny nanesorana azy ireo
Araka ny efa nampoizina, raha vantany vao nanomboka nanatitra ny baiko voalohany an'ny vaovao i Apple iPhone 13, ny ranomaso voalohany dia nanomboka nipoitra haingana tao amin'ny media sosialy. Misy foana ny te hahafanta-javatra mahita ny atin'ny fitaovana vaovao izay miseho eny an-tsena.
Ary iray amin'ireo angona voalohany tonga amin'ny hazavana rehefa mahita ny atin'ny iPhone 13 vaovao, dia ny tena fahaizan'ny baterinao, satria vita pirinty tamin'ny efijery ilay singa. Ka efa manana ny herin'ny bateria amin'ireo maodely efatra an'ny iPhone 13. Andao hojerentsika.
Ny singa voalohany amin'ny kaomandy voalohany an'ny iPhone 13 vaovao manerantany dia efa nanomboka natolotra. Ary mahazatra ny mahita hoe iza no mpampiasa voalohany namoaka ny "unboxing" voalohany sy ny fiatraikany ary ny tena sahy, ny disassemblies voalohany.
Ary mazava ho azy, ny iray amin'ireo angon-drakitra mifandraika indrindra izay azonao jerena rehefa manaisotra iPhone ianao dia ny mahita ny tena fahaizan'ny bateria, satria vita pirinty eo amboniny. Ka efa afaka manamarina isika fa tsy namitaka antsika ilay orinasa, ary tena ireo maodely efatra vaovao an'ny iPhone 13 manana batterie capacité lehibe kokoa noho ny an'ny laharana iPhone 12.
Fampitahana eo amin'ny iPhone 13 sy iPhone 12
iPhone 13 mini: 2.406 mAh vs. iPhone 12 mini: 2.227 mAh
iPhone 13: 3.227 mAh vs. iPhone 12: 2.815 Mah
iPhone 13 Pro: 3.095 mAh vs. iPhone 12 Pro: 2.815 mAh
iPhone 13 Pro Max: 4.352 mAh vs. iPhone 12 Pro Max: 3.687 mAh
Raha mijery ny fahaiza-manao tena izy dia tsy namitaka antsika ny orinasa. Apple dia nanome toky fa ny iPhone 13 Pro dia manolotra 1,5 ora intsony ny fiainana bateria raha ampitahaina amin'ny iPhone 12 Pro, raha ny iPhone 13 Pro Max kosa dia manana fiainana maharitra bateria hatramin'ny Ora 2,5 lava kokoa noho ny iPhone 12 Pro Max.
Ka ny sambo tsy ho ela dia io no zavatra voalohany hita tao amin'ireo disassemblies navoaka voalohany. Hiandry ny fanaparitahana ireo fitaovana izahay iFixit ho an'ny antsipiriany ara-teknika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 13 » Notsapaina ny herin'ny batterin'ny iPhone 13 taorian'ny nanesorana azy ireo
Somary tsy fahita firy fa ny iPhone 13 dia manana bateria betsaka kokoa noho ny iPhone 13 pro
Ny Apple Watch Series 6 oximeter dia mandaitra toy ny dokam-barotra araka ny fanadihadiana iray
Azonao atao izao ny mametraka fiaviana mahazatra ao Safari